သမ္မတရှီက ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်မာကဲလ် နှင့် ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့်ဆွေးနွေး - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်သည် အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်က ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ဂျာမနီနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် အိန်ဂျလာမာကဲလ်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်ဖက်စလုံးက မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တရုတ်-ဂျာမနီ ဆက်ဆံရေးတိုးတက်မှု နှင့် တရုတ်-အီးယူ(EU) ဆက်ဆံရေးတိုးတက်မှုအပိုင်းကို အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီး ၊ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော အရေးကိစ္စရပ်များကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီက “ ယခုဆွေးနွေးမှုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမြင်ချင်းဖလှယ်ရုံမျှသာမက ၁၆ နှစ်တာကာလအတွင်း တရုတ်-ဂျာမနီဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် ချောမွေ့မှုအား ထိန်းသိမ်းရာမှာအရေးကြီးတဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းကိုလည်း ထင်ဟပ်စေပါတယ်” ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင်ရှီက “ အီးယူအနေနဲ့ လွတ်လပ်မှု ၊ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားကို အမှန်တကယ်ကာကွယ်မှု နဲ့ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် စည်းလုံးညီညွတ်မှုတို့ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။ပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အရေးကိစ္စရပ်တွေမှာ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အတူ အီးယူဟာ အခြားသော နိုင်ငံတွေရဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟုရှီက ဆိုသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင်ဂျာမနီနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မာကဲလ်က “ အီးယူ-တရုတ်ဆက်ဆံရေးဟာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ကိစ္စရပ်အမျိုးမျိုးကို ကောင်းစွာကျော်လွှားနိုင်ပြီး ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေမယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
BEIJING, Oct. 13 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping on Wednesday met with German Chancellor Angela Merkel via video link. The two sides reviewed the development of China-German and China-EU relations in recent years and had an in-depth exchange of views over relevant issues inafriendly atmosphere.
On her side Merkel said “I believe that EU-China relations can overcome various complicated issues and continue to develop”.